Prostar yasekwa ngo-1998, onceda abantu kuyilo kunye nemveliso kwizinga eliphezulu le OEM kunye Prostar uhlobo ngayo kwimizi Uninterruptible Power Supply (UPS), Power Inverter, iiphaneli Solar, inkqubo gezi Solar kunye nenkqubo isizukulwana Umoya Power, kunye Emergency Power Supply ( EPS) kwakunye nokulondolozwa-ezamahala ukhokelo acid ibhetri. Prostar has a Design onamava kakhulu kwaye zobungcali kunye neSebe Uphando abasebenza ngokusondeleyo kunye nabathengi zophuhliso lwabo lwemveliso kwakunye uhlengahlengiso yanda Prostar uluhlu brand. Ezinye izinto ezibe negalelo ziquka Quality Umbindi Wolawulo, Purchasing & iZiko lweMveliso, kunye Sales and Service Customer Centre.Prostar ngokupheleleyo linoxanduva lokukhuthaza zoshishino kunye nenkonzo kwi wase-China. Ngokusebenzisa kweshumi iinzame ezinkulu, Prostar wenze ipowusta uthotho ndiziphethe ngayo izinto amandla kunye neebhetri esisetyenziswa ngokubanzi kwiinkalo yemali, Telecom, ugesi, ipetroli chemistry, ezemali kunye urhafiso China, kwaye ngembeko wathi ngabaxumi. Ukuthatha nokwenza iimveliso ezikumgangatho wehlabathi kunye sengqondo ngobungcali enyanisekileyo koxanduva, Prostar unyanzelisa zokufunda kunye ezintsha rhoqo ukuba sizama enyukela encochoyini omtsha lomsebenzi. Thina ngebhongo anamathele umoya "Ukunyaniseka, Intsebenziswano, Ukhuphiswano kunye neyilayo".
uluhlu uzeleyo iimveliso amandla yobonelelo, benikela ukuthenga elinye-stop.
Iqela lokuthengisa Professional, unika iinkonzo eyenziwe lanikezelwa.
Prostar i mveliso ephambili nelithumela UPS, Inverter, imodyuli Solar kunye Ibhetri. ubuchwepheshe bethu advanced nobungcali, imigca imveliso epheleleyo, abasebenzi abanamava kunye nenkqubo yequmrhu engqongqo ukuqinisekisa iimveliso zethu esemgangathweni. Siyazingca kwiimveliso, iinkonzo kunye namaxabiso umgangatho, nikholwe ukuba bathathu ...
Prostar ihluke kwezinye inkampani yakwa yi imiphumela ngayo Sibahlangule. ubuchule bethu bokuthwala ngesiqhelo ezi ziphumo ivela indibanisela yethu ekhethekileyo iingenelo zilandelayo: amava olungangqinelaniyo kunye nobuchule; benchmarks Proprietary, iindlela izinto ngendlela eyiyo, kunye nomsebenzi ...
Enoba ekufumaneni iifoto zakho usapho idijithali kwi-PC ikhaya enye, okanye izigidi zeerandi ze data mission-ezibalulekileyo okanye izixhobo imeko-of-the-art umncedisi wakho inkampani, Prostar onesicombululo esiqinisekisiweyo. Prostar sele inika ukhuseleko noxolo-of-ingqondo kwizigidi kubasebenzisi njengenkokheli jikelele ukhuseleko ngamandla ...
Cwangcisa uphicotho umthamo power ezamahala kunye Amandla iNgcali Prostar uya ukuqikelela iimfuno zakho amandla, ukuchonga iindawo ingxaki enokwenzeka nokucebisa isisombululo iindleko-olusebenzayo. Yintoni uza kufumana: A imephu kunye esele ilandelwa kwaye lusenokunika design wachaza; Iimfuno seprojekthi esicacisiweyo, BOMs kunye nokubalulwa; Ixabiso zokufumana aphantsi nayiphi na ...
ukwenziwa Prostar kunye nokuthunyelwa ngamaxabiso ezingcono umgangatho ophezulu kunye UPS ngendleko ephantsi, Inverter, kwibhetri, Kuya kukhethwa iiphaneli Solar kunye Solar Power System iminyaka emininzi.
1-3KVA High Frequency UPS leposi
10-20KVA High Frequency UPS leposi (3: 1)
Prostar 3KW off igridi iinkqubo elanga ukuba ikhaya lakho
Prostar efikelelekayo inkqubo 4kw elanga kunye qhuqha ...
Prostar inkqubo 5kw elanga kunye backup ibhetri fo ...
Prostar 4000w off igridi langa imveliso ye ...
Prostar inkqubo 2kW elanga kunye iibhetri for ekhaya
Prostar 3000w ekhaya inkqubo elanga kunye ba yokugcina ...
Iinkqubo photovoltaic igridi Prostar 1200w off
Prostar 600 watt off igridi langa
Prostar off grid langa 300W
Prostar 50KVA UPS zifakwe Malaysia Manufacturing ...
Prostar 30KVA UPS zifakwe Vietnam Manufacturing ...
Prostar 80KVA UPS Zifakwe ku Hong Kong Internationa ...
Iminyaka Trade International
Prostar kuyinto professional UPS Solution Provider & Energy Expert e China.
I-UPS sele ifakiwe ngo-2015, yaye loo nto isebenza kakuhle kakhulu ukuza kuthi ga ngoku, umgangatho elibalaseleyo. Ngoko ke ndiyacinga Prostar yindlela ethembekileyo amahla mveliso kunye umthengisi. Ngamava entle ukusebenzisana Prostar.
Prostar Low frequency UPS kwimizi lulunge kakhulu ekukhuseleni koomatshini zethu isiguquli.
Kwaye Prostar ebesoloko bagoba umva ukuhlangabezana neemfuno neemfuno zam ukuqeshwa kwabantu, ukuba nakanjani a umthengisi ekhethekileyo kwinkampani yam.
UMnu Latoya Zainale Engineer Senior
Prostar UPS wakhethwa ngenxa lobungcali emsebenzini yaye uyakwazi ukunika imveliso esemgangathweni onguwo, anelisekile emva-ukuthengiswa kweenkonzo. Prostar i eyaziswa ubumbano siza kuqhubeka ukusebenzisana nabo kwixesha elizayo.
UMnu Volker Mangapis Engineer Senior
ups Prostar basoloko abanamava, zobungcali kunye ukuhlangabezana iziqinisekiso bayacelwa. Kuba 5years elidluleyo ezisebenzisana inkampani yethu, andikwazi ngokuzithemba mpendulo umenzi Prostar of UPS.
UMnu Callum Wood uMphathi Jikelele
mveliso wam kusetyenziswa Prostar UPS phezu 5years kude kube ngoku. Kwaye sikhetha Protar ukuba ixesha cooperator sethu elide kuba lwakho wasabela ngokukhawuleza kakhulu kwaye inyathelo kubathengi, kwaye wenze umsebenzi omkhulu ekuveliseni ups ezisemgangathweni ophezulu kakhulu kwaye nexabiso ngokunjalo. Lilonke, Ndivuye kakhulu ubuhlobo kunye nomsebenzi kunye Prostar.
UMnu Chukwuemeka Okpara Direct Manager
Prostar iqabane ishishini lam oluthembekileyo. olukumgangatho ophezulu kunye kahle eliphezulu panel elanga kunye ixabiso kukhuphiswano kwenza ishishini bethu bakhule ngokukhawuleza
Prostar akwazi isisombululo nelanga ngokupheleleyo. Ndathenga 40kw omnye igridi inkqubo elanga ngo-2012, isebenza kakuhle kude kube ngoku. Sithanda iimveliso Prostar kaThixo.
Mr.Arif Mirza uMphathi Jikelele
Basibonisa ukuba PV elanga umgca kakhulu kwimveliso makhaya. Isityalo iseli elanga ukusika, ibandla iintsimbi, imodyuli laminator automated ngokupheleleyo imveliso kunye kwemveliso eliphezulu. Uvavanyo umgangatho wothantamiso olunzima kakhulu.
UMnu Md.Akram Hossain uMphathi Jikelele